8 × 36 Podcast: Otu izu ka WWDC 2017 | Esi m mac
Ma enwere obere ihe maka WWDC, ụbọchị ise, yabụ anyị bụ ndị ọrụ Apple niile na-eche ụbọchị Mọnde a nke 5 ga-abịarute (Ọ bụ ezie na o siri ike ịsị na anyị na-eche ụbọchị Mọnde) iji hụ akụkọ ahụ na ngwanrọ na ikekwe ụfọdụ ngwaike Apple nwere ike igosi anyị na ogbako ụwa ya maka ndị mmepe.
Na pọdkastị nke abalị gara aga, anyị hụrụ ụfọdụ nkọwa Apple nwere ike iwetara anyị na sistemụ ya, ma na iOS, dịka na macOS, watchOS na tvOS. Na nkenke, ọ bụ maka ịnye ihe kpuru ìsì ma ọ bụ ịjụ ihe anyị chọrọ iji melite maka sistemụ ndị a ebe ọ bụ na enweghị ọtụtụ ntanye mgbe anyị na-ekwu maka sọftụwia Apple na o siri ike ịmata ihe ha nwere ike iju anyị anya.
na ndozi na Siri, Mail na ngwa Apple ndị ọzọ Ọ ga-abụrịrị otu n'ime isi ihe n'ehihie Mọnde. Na nkenke, anyị ekwenyeghi na Apple na-ebupụta mgbanwe mgbanwe aesthetic na sistemụ ya ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa, ọtụtụ na-arụ ọrụ nke ọma na ịmecha nkọwa bụ ihe ọ metụrụ na nsụgharị ndị a dị ugbu a. N’ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na ha agbakwunye ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ mmelite ha, a ga-anabata ha nke ọma, yabụ anyị na-akpọ gị oku ka ị gee ntị na pọdkastị ahụ ma soro anyị kerịta echiche gị.
Dịka m kwuru na mbido isiokwu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbaso usoro nke oge nke asatọ a, ị ga-emerịrị denye aha na iTunes channel. Ma ọ bụrụ na Kama nke ahụ, ị ​​na-ahọrọ YouTube ka enwe ọ bụla nke pọdkastị, ị ga-akwụrịrị ọwa anyị ma denye aha, nke mere na oge ọ bụla vidiyo kachasị ọhụrụ dị, ị ga-enweta ọkwa site na akaụntụ email gị ma ọ bụ site na ngwa YouTube.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Podcast 8 × 36: Otu izu ka WWDC 2017